Ra'iisul wasaare ku-xigeenka Oo fariin cajiiba u direy Mamulka Soomaaliland — CAASIMADA
Home WARARKA MANTA Ra’iisul wasaare ku-xigeenka Oo fariin cajiiba u direy Mamulka Soomaaliland
Ra’iisul wasaare ku-xigeenka Oo fariin cajiiba u direy Mamulka Soomaaliland
Muqdisho (CaasimadaTimes)-–Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka dalka Mahdi Maxamed Guuleed ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay odayaashii maalmo ka hor Hargeysa kula kulmay Madaxweynaha Somaliland, Muuse Biixi Cabdi.
Nabadoon Maxamed Xasan Xaad oo hoggaaminayay odayaashii dhaqanka ee la kulmay Madaxweynaha Somaliland ee uu ku soo wareejiyay 19-ka maxbuus ee cafiska uu u fidyay ayaa Ra’iisul Wasaare ku-xigeenka warbixin ka siiyay sidii loogu soo dhaweeyay Hargeysa.
Mahdi Guuleed ayaa sheegay inuu Muuse Biixi ku amaanayo soo dhaweynta Soomaalinimada leh ee uu ku qaabilay odayaashii ka socday Koonfurta Soomaaliya ee Hargeysa ka doontay Wiilashooda sanadaha badan xabsiga ku jiray.
RW ku-xigeenka dalka ayaa sidoo kale odyaasha dhaqanka uga mahad celiyay gacanta ay ka geysteen in mawaadiniinta Soomaaliyeed ay xorriyaddooda dib u helaan, waxa uuna ku dhiirri geliyay in ay sii wadaan kaalintooda oday dhaqameed ee bulshada dhexdeeda ay ku leeyihiin.
Odayaashii uu la kulmay RW Ku xigeenka ayaa ka dalbaday in la soo daayo oo iyana cafis loo fidiyo mawaadiniin kale ee dhallinyarada uu cafiska u fidiyey Madaxweyne Muuse Biixi ay isku xukun ahaayeen, kuwaas oo intooda badan ku kala xiran Xabsiga dhexe ee Xamar iyo xabsiyada maamulka Puntland.
Previous articleCiidamdii Dowladda Oo iskaga baxay Hobyo Ciidamo kale Oo u ababulan hab qabiil Oo la wareegay Xiisad ka taagan..
Next articleThe foreign hand in Somalia’s terror attacks
Xog Xasaasiya:Maxaa walaaleeyey Kenya & Axmed Madoobe
DEGDEG:Khilaaf Xoogan Oo soo kala dhex galay masuuliyiinta u sareysa mamulka...